आज २ बजे बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक | PBM News.com
काठमाण्डौं १५ जेठ । बिहीबार २ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थाापाका अनुसार आज २ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बलाइएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवाडासँग बजेटका बारेमा जानकारी लिन बैठक डाकिएको बताइएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि आज दिउँसो १ बजेलाई बैठक डाकेको छ । दिउँसो १ बजे योजना आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानामन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा डाकिएको बैठकमा योजना आयोगका सबै सदस्यका साथै अर्थमन्त्री डा. खतिवडा, मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी पनि रहनेछन् ।
यातायात व्यवसायीले केही दिनभित्रै सार्वजनिक सवारी चलाउने